Ncell revised international call charges for 19 countries Tech News Nepal
मंगलवार, जेष्ठ २५, २०७८ १४:४३
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जेठ २१ देखि लागू हुने गरी विश्वका १९ देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क परिमार्जन गरेको छ । नयाँ शुल्कहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई प्रदान गरेको स्वीकृत शुल्क तथा कल दरअनुसार नै रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
नयाँ परिमार्जित अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्कअनुसार माथि उल्लेखित १८ देशहरुको शुल्क करबाहेक प्रति मिनेट रु. ३० निर्धारण गरिएको छ भने माल्दिभ्सको प्रतिमिनेट कल शुल्क कर बाहेक रु ३०.६५ निर्धारण भएको छ । यसअघि यी देशहरुमा कल गर्दा गन्तव्य देशअनुसार प्रतिमिनेट रु. ४.९९ देखि रु. १५ सम्म लाग्ने गरेको थियो । अझैपनि माल्दिभ्सको लागि एनसेलको प्रति मिनेट कल शुल्क अरु सेवा प्रदायकले लिने शुल्क भन्दा कम रहेको छ ।
केही यूरोपियन गन्तव्यहरुमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क अझै पनि स्वीकृत दरभन्दा निकै बढी रहेकोले हाल यी देशहरुका लागि गरिएको शुल्क परिमार्जनपछि ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्ने क्रममा एनसेल अझै पनि घाटामै रहने छ । प्राधिकारणबाट स्वीकृत कल शुल्क प्रति मिनेट रु. ३० रहे पनि कल गरिने गन्तव्य देशअनुसार कुनै-कुनै यूरोपियन गन्तव्यहरुको कल शुल्क करबाहेक रु १,१७०.३० सम्म रहेको छ ।